Sidee Ganacsigaagu ugu rogi karaa booqdayaasha Websaydhada aan la garanayn inay madax u noqdaan | Martech Zone
Sannadkii la soo dhaafay, waxaan tijaabinay xalal kala duwan oo loogu talagalay macaamiishayada B2B si aan si sax ah u aqoonsanno booqdayaasha websaydhka. Dadku waxay booqanayaan goobtaada maalin kasta - macaamiisha, hogaamiyaasha, tartamayaasha, iyo xitaa warbaahinta - laakiin waa caadi Analytics ma siinayo aragti ku saabsan ganacsiyadaas. Mar kasta oo qof soo booqdo websaydhkaaga, meesha uu ku yaal ayaa lagu garan karaa cinwaankooda IP. Cinwaanka IP-ga waxaa lagu soo ururin karaa xalalka dhinac saddexaad, aqoonsiga lagu lifaaqay, iyo macluumaadka laguugu soo gudbiyo adiga oo ah hoggaan.
Xalalka qaar ee aan haynay waxay ka shaqeynayeen xog duug ah, qaar waxay lahaayeen wajiyo aad u xun, qaarna ma helin fursado ay ku xoojiyaan wararka… waxay ahayd wax laga xumaado. Xitaa waxaan u saxiixanay qandaraas hal xal ah oo aan waligood cusbooneysiin xogtooda ama is dhex galkooda mana naga fasaxayaan qandaraaskeena. Sida dadka jooga Demandbase ay u qoreen, Aqoonsiga shirkaddu wuu ka khiyaamo badan yahay sidaad moodeysid.
98% booqdayaasha websaydhada B2B weligaa ha saxeexin ama ha u beddelin si aanad u helin wax fikrad ah waxa shirkadaha ku yaalliin bartaada ama waxa laga yaabo inay raadinayaan. Xalalka Premier sida Demandbase xitaa waxay bixiyaan karti u lahaanshaha shakhsi ahaaneed ee ku saleysan shirkadda booqda bartaada - quruxsan.
Shirkadaha B2B waxay arkayaan natiijooyin aan caadi ahayn iyagoo adeegsanaya adeegyo sida Demandbase. Waxqabadka ka socda websaydhkaaga iyo raadinta la xidhiidha ee keenay shirkadaha halkaas ayaa faa'iido u leh dhibcaha hoggaaminta, mudnaanta, iyo fahamka waxa rajada ama macaamilku ay raadinayaan. Awoodda in aad ku aragto xogtan waqtiga-dhabta ah waxay ka caawin kartaa kooxdaada dibedda ah inay ku xirmaan rajo marka ugu horreysa waqtigu yahay mid aad u muhiim ah - maadaama ay baarayaan alaabadaada ama adeegyadaada.
Waxqabadka martida ayaa sidoo kale fulin kara digniino, lagu diiwaangelin karaa nidaamyada Suuqgeynta Xiriirka Macaamiisha (CRM) sida Salesforce, iyo xitaa inay fuliyaan ololeyaal nafaqeyn leh. Tani waa tiknoolajiyad awood leh oo mudan in la maalgashado.
Tags: ganacsi ip eegisbadala hogaamintagartaan tilmaamahacadee martidakordhiya sheekooyinkaInfusionsoftraadinta ipmicrosoft firfircoonaanta crmiibinSugarCRMaqoonsiga booqdaha degelkaBuugaagta shaqadaZoho
Badhanka ugu Wanaagsan ee Wadaag Bulsheedka loogu talagalay WordPress